Munaasabad lagu soo xirayay kalfadhigii 5-aad ee Baarlamanka oo xalay lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Madaxda dalka ayaa ka qeybgashay munaasabad lagu soo xirayay kalfadhiga 5-aad ee baarlamanka taasoo xalay lagu qabtay xarunta Villa Hargeyso ee magaalada Muqdisho.
Xaflada xiritaanka kalfadhiga 5-aad ee baarlamanka ayaa waxaa ka qeybgalay ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamanka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, R/wasaare ku xigeenka, xildhibaano, mas’uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf.
Munaasabadda ayaa la isku weydaarsaday aaraa’ ku qotonta howshii la soo qabtay kalfadhigii Shanaad ee xalay la soo xiray, iyadoo mudanayaashii hadlay ay isku raaceen in kalfadhiga 5-aad uu ahaa kii ugu adkaa, maadaama baarlamanka ay soo dhex gashay kala aragti duwanaan ay ku sameysmeen Kudlado.
Kooxda fanaaniinta deegaan ayaa munaasabadda ku soo bandhigtay suugaan dhaxal gal ah oo u badneyd guubaabo, taasoo ay u riyaaqeen mudanayaasha baarlamanka iyo martisharaftii ka qeybgashay xafladda.
Ku simaha R/wasaaraha Maxamed Cumar Carte oo munaasabadda ka hadlay ayaa baarlamanka uga mahadceliyay ansixintii xukuumadda, isagoo dhinaca kalena dowladda iyo shacabka Jabuuti uga tacsiyeeyay geeridii ku timid gudoomiyihii baarlamanka Jabuuti.
Ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo soo xiray kalfadhiga Shanaad ayaa mudanayaasha ku wargeliyay in kalfadhiga Lixaad ay baarlamanka sugayaan howlo adag, wuxuuna xukuumadana kula dardaarmay iney wada shaqeyn joogta ah la yeelato baarlanka, isagoo hoosta ka xariiqay in taasi ay horseedeyso in la gaaro hiigsiga cusub ee 2016-ka.